Ubusuku kunye neenqwelo moya zibalaselisa ubuhle beenqwelo moya nguAzul Obscura | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ubhlu omnyama uthimba iinqwelomoya ezidla ngokudlula zingabonwa ngabakhweli abaqhelekileyo abadla ngokuthatha ezi nqwelo-moya. Emi ezindleleni, umfoti osusela e-Osaka uxwebhu lwefayile iinqwelomoya xa usondela kumgaqo weenqwelo moya kwaye ulindele ukufika kwakho okanye uthathe uhambo. Nangona kuyinto eqhelekileyo, Luhlaza oMnyama inendlela ethile, ukhetho lwakho lokurekhoda imifanekiso ebusuku longeza imvakalelo enomdla kuyo yonke inkqubo.
Uluvo luka-Azul Obscura lukwabonelela ngokujongeka okukhulu kwiijethi zorhwebo nakwinqwelomoya. Imizimba yabo yentsimbi iyancediswa imibala eqaqambileyo, izibane zeenqwelo moya kunye Indawo ejikelezileyo ejikeleze le mifanekiso mikhulu. Zizakhelo ezintle kunye Iimpawu ezintle zeenkwenkwezi kwaye yintoni eqaqambileyo isetyhula amaza ezibonakala phantse ngaphandle kweli hlabathi. Ngokuqinisekileyo kubonakala kunomtsalane ngakumbi kunokulinda kwimigca yokhuseleko kunye nokuphononongwa kolwazi lokhuseleko. Endaweni yokuba iifoto zika-Obscura zisikhumbuza ngobukhulu bokuhamba ngenqwelomoya. Nantsi igalari yeefoto ezintle.
Phakathi kweempapasho zakhe kubonakala 'Imagazini yokufota yedijithali ye-SLR' ngalo Matshi 2016, 'Imagazini yeFoto Masterclass' y Inkqubo yeJapan yeTV «Kulungile! ntseni "'. UAzul Obscura ngumfoti ovela e-Osaka, eJapan. Iikhamera, iilensi kunye nezinto ozisebenzisayo zezi zilandelayo.
Iimpawu zeSIGMA SD1
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ubusuku kunye neenqwelomoya zibonisa ubuhle beenqwelo moya nguAzul Obscura